အာရှသားရဲ့နည်းပညာ: Facebook Fun Page ကို Admin ထပ်တိုးမယ်....
Facebook Fun Page ကို Admin ထပ်တိုးမယ်....
How to Make Someone an Admin of Your Facebook Fan Page!!
ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ Fun Page တွေ၊ ကြော်ငြာ Page တွေ၊ လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပီးတော့ Page တွေကို အများစု Created လုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာ တစ်ကယ်တမ်း တစ်ယောက်တည်း မနိုင်လာတဲံအခါမျိုး တို့ မိမိကိုယ်တိုင်က မအားလပ်လို့ အမြဲတမ်း Update မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာ မိမိကိုယ်ပိုင် Page ကို မိမိယုံ ကြည်တဲ့သူ သို့မဟုတ် တစ်ခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို Page Admin Permission ပေးတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်- မိမိပေးမယ့် Admin Level လက်ခံပေးမယ့်သူကလည်း သက်ဆိုင်ရာ Facebook Account ရှိပီးသား ဖြစ်ရပါမယ်။
မိမိ Facebook Fun Page ရှိ Admin Panel ကိုသွားပါ။ထို့နောက်အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း Edit Page ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက်အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း Manage Admins Roles ကိုသွားပါ
ထို့နောက် အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း မျှားအနီလေးပြထားသော နေရာ (Add Another Admin) ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ
ထိုအခါပေါ်လာမယ့်အောက်ဖော်ပြပါ Box အတွင်းတွင် မိမိသတ်မှတ်ချင်တဲ့ Facebook User Account နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ Mail Address ဖြင့်ရိုက်ထည့်ပါ။
၄င်းနေရာတွင်တစ်ခုရှင်းပြချင်သည်မှာ မိမိ Add လုပ်မယ့် User ကို ဘယ် Level မှာထားမှာလည်းဆိုတာဖြစ်ပါ တယ်။သူ့ကိုလည်း မိမိအလားတူ Permission တွေသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Manager Level သတ်မှတ် ပေးပီး အဲဒီလိုမှ မသတ်မှတ်ချင်တဲ့အခါ မျှားအနီလေးပြထားနေရာမှ Level များကိုသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အစမ်းပြတဲ့အနေနဲက Manager Level Permission ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ပီးသွားရင်တော့ Save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်အောက်ဖောပြပါပုံအတိုင်း Password တောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါက သင်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ Setting Configuration အတွက် Password တောင်းတာပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ သင် အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးပီးသွားတဲ့အခါမှာ သင်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ Admin အသစ်တစ်ယောက်က သင့် ရဲ့ FB Page ကို သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ သူ့ဆီမှာလည်း Admin Permission ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
နည်းပညာတွေကိုဒီထက်မကလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့် ဂရုလေးများဖြစ်သော
ဂရုတို့တွင်နည်းပညာများကိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေး မေးမြန်း ဝေမျှပေးဖို့လည်း အကြံပြုလိုပါတယ်။
Cristiano Zarni @ဦးဇာနည်
Posted by အာရှ သား
မောင်ပေါက် July 9, 2013 at 7:04 AM
Thanks, Mr Zarni...
TingNaing Htun July 9, 2013 at 7:44 AM
Thanks, My Brother
လူဖတ်အများဆုံး Post များ
သင့်ဖွက်ထားတဲ့ G-mail က လုံခြုံနေပြီလား ?
သင့်ဖွက်ထားတဲ့ G-mail က လုံခြုံနေပြီလား ? မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့အကြေင်းအရာကတော့ Facebook ပေါ်မှာ တော်တော်များများ လည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ ...
Facebook ကို ဟက်မခံရအောင် 95% Security ခံထားနည်း
Facebook ကို ဟက်မခံရအောင် 95% Security ခံထားနည်း မင်္ဂလာပါ ဒီရက်ပိုင်းတင်မဟုတ်ဘူး ဘယ်တော့မှ မရိုးအီနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုက C...
Hack ပြီး2Step ခံသွားတဲ့ G-mail ကို ပြန်လိုက်နည်း.
Hack ပြီး2Step ခံသွားတဲ့ G-mail ကို ပြန်လိုက်နည်း. Wow…. Wow…. Wo…. ခေါင်းစဉ်က နည်းနည်းကြီးသွားပြီထင်တယ် ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ…. အ...
Facebook ရဲ့ Status အောက်မှာ Voice Comment ပေးကြမယ်။
Facebook ရဲ့ Status အောက်မှာ Voice Comment ပေးကြမယ်။ ဒီနည်းကတော့ လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Facebook အသုံးပြု သူတိုင်းအမျ...
ဖုန်းသို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာကနေလုပ်ဆောင်ရန်2Step Verification Update
ဖုန်းသို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာကနေလုပ်ဆောင်ရန်2Step Verification Update2Step Verification အကြောင်းကိုတော့ ရေးပေးခဲ့ဖူးတာ တော်တော်ကြ...
Mobile ပြုပြင်ခြင်း သင်တန်းကျောင်း
CHKDSK Command နဲက Hard Disk Error တွေကို အနည်းငယ်...
Java ဘာသာရပ်ကို မြန်မာလိုဖတ်ချင်ရင်
အင်တာနက်ဂျာနယ်တို့မှာပါတဲ့ Sodoku ကို လျှင်မြန်စွာ...
Hacking လောကမှာလည်း ဆေးထိုးတယ်ဆို တာရှိပါတယ် အဲဒါက...
ကောင်းနိုးရာရာ Hacking Tools များစုစည်းမှု
သင့် မူရင်း IP ကို ဖျောက်ထားမယ်....
Window Loader ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
ဦးဇာနည်. Simple theme. Theme images by gaffera. Powered by Blogger.